Olee otu ndị na-ere ahịa nwere ike isi bulie Mgbasa Ozi Ekeresimesi Mobile iji bulie Ego | Martech Zone
Kedu ka ndị na-ere ahịa nwere ike isi bulie Mgbasa Ozi Ekele nke Elu iji bulie Ego
Oge Krismas a, ndị na-ere ahịa na azụmaahịa nwere ike ịkwalite ego ha nwetara n'ụzọ dị ukwuu: site na azụmaahịa mkpanaka. N'oge a, enwere ndị nwe ama ama 1.75 ijeri n'ụwa niile na nde 173 na US, na-aza ajụjụ maka ọnụọgụ 72% nke ahịa ekwentị mkpanaka na North America.
Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị na ekwentị mkpanaaka emechiela desktọọpụ n'oge na-adịbeghị anya na 52% nke nleta weebụsaịtị na-eme ugbu a site na ekwentị mkpanaaka. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị na-azụ ahịa na-etinye oge na atụmatụ azụmaahịa dịka email nwere ike ịbụ naanị sekọnd atọ. Ghọta ahụmịhe onye ọrụ mkpanaka dị ezigbo mkpa maka ndị na-ere ahịa iji bulie mbọ ahịa ma bulie ahịa n'oge ezumike.
Site na itinye mkpanaka na etiti nke usoro omni-channel, ndị na-ere ahịa na ụdị ga-eme ka mmekọrịta ọhụrụ, itinye aka, mkparịta ụka, na iguzosi ike n'ihe dị ọhụrụ. Na ego ha nwetara. FitForCommerce
SmartFocus na-enye ụfọdụ nghọta na ya Ndụmọdụ Ahịa Mobile maka ndị ahịa na azụmaahịa. A bụ ihe a zoro ezoro peek na 5 nke ụlọ ọrụ mobile ahịa Atụmatụ.
Na-ebuli maka Mobile - 30% nke ndị na-azụ ahịa ekwentị na-ahapụ azụmaahịa nke ahụmịhe onye ọrụ ha abụghị nke kachasị maka ngwaọrụ mkpanaka ha. Gbaa mbọ hụ na ozi ịntanetị gị dị mma karịa nyiwe niile.
Were na Akaụntụ Oge, Ọnọdụ, na Nso nke Ndị Ahịa Gị - Ghọta mgbe, ebe, na otu esi akpachi ndị ahịa mkpanaka gị anya mgbe ha na-achọgharị. Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ndị ahịa ị nwere ike ịdọrọ naanị dabere na ịre ahịa na ndị ahịa dabere na ihe ndị a dị mfe, na-enye gị ohere ịme mkpọsa gị kachasị mma yana ịbawanye ahịa.
Na-egbochi Ngosiputa ihe na idozi ya - Ngosi ihe ngosi erughị ezigbo mma ma a bịa n’ahịa ire ere n’oge ezumike. Webrooming (makwaara dị ka agbara showrooming),, n'aka nke ọzọ bụ ihe na-eme mgbe ndị na-azụ ahịa nyocha ngwaahịa na ntanetị tupu ha abanye na ụlọ ahịa iji zụta ihe ndị ahụ. Dabere na Forrester Research, webrooming ga-ebute $ 1.8 trillion na ahịa site na 2017, ebe ahịa ecommerce kwesịrị iru $ 370 ijeri n'otu afọ; webrooming bụ ebe ndị ahịa ga-ere ahịa n'ọdịnihu ga-achị. Ọ dị mkpa ịmepụta ihe mkpali maka ndị ahịa ịbata n'ụlọ ahịa gị ma zụta ngwaahịa gị n'ezie kama ị nweta ha ọnlaịnụ maka ọnụahịa kachasị ọnụahịa na weebụ.
Mee nchọta ekwentị dị mfe - 57% nke ndị ahịa mkpanaka ga-ahapụ saịtị gị ma ọ bụrụ na ha ga-echere sekọnd atọ maka otu peeji nke ibu. N'ezie, 100 millisecond na-abawanye na oge ibu na-ebelata ahịa site na 1%. Jide n'aka na ibe gị na-ebu ngwa ngwa ma kachasị maka ịnweta mkpanaka.
Mejuputa Teknụzụ Beacon - idi nso ahia na-arụ ọrụ ọhụụ dị mkpa n'ịchịkọta ntanetị na ntanetị site na teknụzụ nkwupụta amụma nke na-ahazi ozi ahịa na ndị ọrụ ọ bụla dabere na ọnọdụ ha, omume ịzụ ahịa na nke anụ ahụ, yana ọnọdụ nke mkpebi ịzụta ikike ha. SmartFocus bụ onye ndu na teknụzụ mgbaama ma jiri ya na-enye ndị ahịa nghọta miri emi banyere ya.
Maka nghọta zuru oke, hụ na ị gara SmartFocus ' Ndụmọdụ Ahịa Mobile maka ndị ahịa na azụmaahịa.
Tags: nkà na ụzụkeresimesi ekeresimesinjikarịcha mkpanakamkpanaka ọchụchọidi nso ahiaagbara showroomingegosismartfocussmartfocus mobile ahịaime websaịtị
Ntuziaka maka ịtụ B2B Ahịa Ọganihu
Multi-Channel B2C Mgbasa Ozi alizeghọta a 24% Greater Laghachi na Investment